Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba Eziphambili zaseThailand » Ukusuka eSuper Fun Spot Spot ukuya kwiiNdonga zoKhuseleko kunye neepatroli
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • ulwaphulo-mthetho • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Iindaba Eziphambili zaseThailand • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
Ukuhamba ngesitalato ePattaya-umfanekiso ngoncedo lwePattaya Mail
Indawo eyoyikisayo engenanto kwisitalato esaziwa kakhulu ePattaya iphazanyiswa kuphela ziiyunithi ezintathu zevenkile esele zivulekile: ivenkile yosapho eyiMart Mart kunye nekhemesti encinci ekubonakalela ukuba inabantu abambalwa abasendaweni, kunye nevenkile yeempahla yaseJapan elindile ngomonde amaxesha amnandi okuqengqeleka.
Kwinyanga ephelileyo, iklabhu yasebusuku yeNashaa yawa lixhoba lomlilo kwaye ngoku ifihliwe ngasemva kocingo oluphezulu kakhulu lokhuseleko lwesinyithi.
Ngenxa yezizathu zokhuselo, ezinye izakhiwo ezininzi ezikule ndawo zigqunywe ngetsheyinti elifanayo kwisitalato esidumileyo sokuhamba.
Oonogada baphindaphindwe kathathu ukusukela esi sehlo noxa kungekho bathengi kwezi ntsuku.
The Ixhoba lomlilo kwinyanga ephelileyo, Iklabhu yasebusuku yeNashaa ePattaya, Thailand, ngoku ikhuselwe ngocingo oluphezulu kakhulu olunendawo yokungena encinci. Utshintsho olumangalisayo lwesitrato sokuhamba sisuke kwindawo emnandi kakhulu saya kwidolophu yesiporho, kunye nezinye izakhiwo ezigutyungelwe ngetsimbi efanayo ngenxa yezizathu zokhuseleko.
Kwindawo enekhilomitha enye, inani loonogada abaqeshiweyo labucala liphindaphindwe kathathu. Ibha yangaphambili yayinqumle iindleko zayo zokhuselo ngokusebenzisa inja ebotshelelwe ngumsindo endaweni leyo isongeza isoyikiso sayo sokukhonkotha kwisaziso seelwimi ezimbini esiyalela abadlulayo ukuba bangangeni naphantsi kwazo naziphi na iimeko. Xa ingasoyikisi bantu, inja ihleli emethini ethi "Wamkelekile."
Ngobubele bePattaya Mail
Unogada okufutshane uMnu. Katee uthe, “Umlilo waseNashaa wenze wonke umntu ukuba othuke. Nangona kungekho bathengi kwezi ntsuku, isekhona imali eninzi ebotshelelwe kwezi zakhiwo zakudala. ” Ucinga ukuba abanini kunye nabaqeshi balinde ukuhlawulwa ukulungiselela ukudilizwa ngokupheleleyo.
Asinguye wonke umntu ovumayo. Amanye amajoni ekhibhodi yendawo acinga ukuba yinto nje yexesha ngaphambi kokuba ishishini njengesiqhelo libuyise ubhubhane kunye namaxesha amnandi aqhubeke kwakhona. Kuya kufuneka bathathe uhambo lokuhambahamba apho ngaphambi kokuba bazithembe kakhulu. IHolo yeSixeko, ngokwenxalenye yayo, ngokuqinisekileyo ixhasa utshintsho olukhulu oluzayo. Akukho mvume yokuqhuba amashishini anxulumene notywala ayakukhutshwa ngo-2022, ngelixa izakhiwo ezikwicala lolwandle ezingena emanzini zicwangciselwe ukudilizwa. Inkampani yombane yephondo isebenza nzima ingcwaba iintambo ezihamba ngaphezulu kwisitrato i-Walking Street, kodwa umbono jikelele kukulungiselela ukuhamba-ngeendawo zokuzonwabisa kunye nezo shishino endaweni yokubalekela i-chrome pole dancers.
Umgaqo woQoqosho lweMpuma, indibaniselwano etyebileyo yeenkampani ezinkulu zaseThai nakwamanye amazwe, yeyona nto igqibayo. I-EEC sele ixhase iiprojekthi ezininzi zalapha ekhaya - amakhonkco endlela, ukuphuculwa kwezibuko laseBali Hai, ukulungiswa kweelwandle iJomtien kunye nePattaya, kunye nomgaqo kaloliwe okhawulezayo odibanisa indawo neBangkok - kwaye bambalwa abathandabuzayo ukuba izakuhamba kungekudala kwisitalato i-Walking Street. Xa oogandaganda ekugqibeleni bengena, isitrato esahluke kakhulu siza kuvela eluthuthwini.
Ngalo naliphi na ixesha, ucingo olubiyelweyo kunye nocingo oluqinisiweyo aluyi kuphoswa nangubani na. Abakhenkethi kuphela kwezi klabhu ngoku ziitraki zokulahla inkunkuma.